DroppTV: Iji AI Mara ma Ree Ngwaahịa na vidiyo | Martech Zone
Tuesday, October 20, 2020 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Douglas Karr
Dị na-arịwanye elu na-eji teknụzụ iji mepụta ahụmịhe ọhụụ ọhụụ na oge ịnọ n'ụlọ. Ma, n'otu oge ahụ, a na-amanye ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịchọ ihe ndị ọzọ na-enweta ego na-enweta ego n'oge a na-emechi ihe nkiri na ebe egwu.
Tinye anwu, mbụ ikpo okwu ntaneti izizi ụwa. Ikwuputa ya na vidio egwu, droppTV na-eme ka ndị na-ege ntị lelee ọdịnaya ka ha na-agagharị na ntanetị nke ọma ụlọ ahịa pọpụtị mebere ịzụta ụdị uwe nwere oke. Ikpo okwu na-enyere ndị okike (na akara aka) aka itinye ego na vidiyo ha, ihe ngosi ha, na ihe nkiri ha site na teknụzụ vidiyo smart AI nke mara mma.
anwu lekwasịrị anya n'ihe okike ugbu a - na-emebi mgbasa ozi ọdịnala, mkpọsa, na paradaịs vidiyo. Ọ bụ ikpo okwu na-asọ asọ dị na ntanetị nke egwu, ọdịbendị, ejiji, na ndị ama ama na-enye ndị na-ese ihe ikike ịmepụta ụlọ ahịa na-ewu ewu na vidio egwu ha ka ha nwee ike ree ngwa ahịa ha, mbipụta ole na ole, na uwe akwa n'okporo ámá.
Obi dị anyị ụtọ na anyị na-enyere ndị na-ese ihe na Fans aka ịchọpụta ma jikọọ ibe ha na ọkwa dị omimi. Vidio egwu dị iche iche dịka ha dị na njikọta ọdịbendị, nka, egwu, na ejiji ma ọ bụ nhọrọ doro anya maka ngwa izipu mbụ nke teknụzụ anyị.
Gurps Rai, droppTV CEO & Co-guzobere
Ikpo okwu na-eji Amamịghe echiche iji chọpụta ngwaahịa n'ime vidiyo, na-ekwe ka onye okike ma ọ bụ onye nwe vidiyo ahụ nyochaa vidiyo ahụ site na ịre ngwaahịa na ngwaahịa. Nke a bụ ọganihu dị egwu na teknụzụ nwere ọtụtụ ikike.
A na-akwado ikpo okwu site na ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ, mmụta igwe, na nhụjuanya kọmputa. Ndị na-ekiri ya nwere ike ịlele ma zụta ihe na ngwaọrụ ọ bụla - ama, mbadamba, ma ọ bụ desktọọpụ. Ngwa mkpanaka dị ugbu a iOS na na android ọ ga-adịkwa nso na AppleTV n'oge na-adịghị anya.
Cheedị banyere ọrụ gụgharia na-echekwa vidiyo ọ bụla nwere ọtụtụ ebe ọkụ ọkụ na vidiyo niile agbakwunyere ụgbọ. Ma ọ bụ, ikekwe ọ bụrụ na ị bụ ika, ịnwere ike ịgbazite onye okike ma kpoo mmetụta ha iji ree ngwaahịa gị ozugbo na vidiyo ha.
Enwere m ike ịhụ Amazon kpamkpam, n'ọdịnihu dị nso, na-enye ohere ịmepe windo ịzụ ahịa mgbe ị na-ele FireTV gị, na-agagharị na ngwaahịa ahụ na ihuenyo ahụ, wee tinye ya na ụgbọ ibu azụmahịa Amazon gị.
Nke a bụ ọdịnihu nke azụmahịa na-eduga ọdịnaya, na-ewere ọdịnala ọdịnala na ụdị vidiyo ma jikọta ha iji mepụta ihe ọhụrụ iji ruo ndị ahịa nke otu Lee ya. Chọrọ ya. Zụrụ ya. mkpali.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị iji dropp.tv dị ka onye na-azụ ahịa, ị nwere ike ịdebanye aha ebe a:
Mepụta Akaụntụ Dropp.tv
Tags: aiinyinyankd .tvinfluencerahịa ahịaVidio egwuecommerce vidiyo